धादिङको गुम्दीमा ३ वर्षीय बालकलाई कहाँबाट सर्‍याे कोरोना ?
कोरोना भाइरस बालबालिकामा कमै सरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । अरू देशमा विशेषगरी दीर्घ रोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई असर गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा ३ वर्षीय बालकमा पनि कोरोना भाइरस पोजिटभ देखिएको छ । साथै, संक्रमित हुनेहरू पनि कम उमेरका छन् ।
मंगलबार लमजुङको सुन्दरबजारका ३ वर्षीय बालकमा कोरोना भाइरस देखिएको हो । तर, बालकलाई संक्रमण भएको पुष्टि हुँदा पनि सरकार बालकसम्म पुग्न सकेको थिएन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले लमजुङका ३ वर्षीय बालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि गर्‍यो । लमजुङको भनेर हल्ला गरियो । तर, उनी काठमाडौंको वनस्थली बस्दै आएका रहेछन् । ती बालकमा कोरोना संक्रमण भएको परिवारले थाहा पाए पनि सरकारले ढिला गरी मात्र थाहा पायो ।
त्यसपछि उनको ट्राभलहिस्ट्री निकालियो । उनी लमजुङबाट धादिङकाे गुम्दी, सातदाेवाटाे हुँदै काठमाडौंको वनस्थली आएका रहेछन् ।
‘लमजुङबाट आएर बालक यहाँ ५० दिन बस्नुभएको थियो,’ गंगाजमुना–४ का वडाध्यक्ष हरिमान श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि काठमाडौं जानुभएको हो । काठमाडौंमा घरबेटीले रिपोर्ट नभएसम्म छिर्न नदिएपछि परीक्षण गर्दा बालकमा पोजिटिभ देखिएको रहेछ ।’
ती बालक स्वास्थ्यचौकीका डाक्टरको छोरीको छोरा रहेको उनले बताए ।
१७ जनाको परीक्षण
बलकमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि स्वास्थ्य चौकी र वरपरका १७ जनाको परीक्षणका लागि स्याम्पल लिइएको उनले बताए ।
‘बालकमा पोजिटिभ देखिएपछि परीक्षणका लागि स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी, बालकसँगै खेलेका अरू बलबालिका र डाक्टर बसेको घरका अन्य सदस्यको परीक्षणका लागि स्याम्पल लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ ।’
स्वास्थ्य चौकी सिल
बालकमा संक्रमण देखिएपछि स्वास्थ्य चौकी सिल गरिएको उनले बताए । ‘अहिले स्वास्थ्य चौकी सिल गरेका छौँ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सबैको रिपोर्ट आएपछि के गर्ने निर्णय गर्छौं । यसका लागि गाउँपालिकाको बैठक पनि बोलाइएको छ ।’
बालकसँगै रहेका आमा, मामा, हजुरआमाको परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएको छ । बालकसहित उनीहरूको परीक्षण टेकुमा गरिएको थियो ।
बालबालिका र योङमा संक्रमण किन ?
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कम भएकाले योङलाई संक्रमण देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । योङलाई लक्षण पनि त्यति देखिँदैन । त्यसैले परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिन्छ । तर, लक्षण देखिँदैन ।
‘नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कम छ,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. पदम सिम्खडाले भने, ‘योङमा संक्रमण देखिए पनि लक्षण देखिएको छैन । ८० प्रतिशतमा सामान्य नै हुन्छ ।’
भाइरसले उमेर भन्दैन
अर्का जनस्वास्थ्यविद डा. रवीन्द्र पाण्डेले रोग जोकोहीलाई पनि लाग्ने तर बालबालिकामा मृत्युदर कम हुने बताए । ‘अरू देशका बालबालिका घरभित्र बस्छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतका बालबालिका बढी घरबाहिर हुन्छन् । त्यसैले पनि बालबालिकामा देखिएको हो ।’
नेपालमा ६ देखि १५ वर्षसम्म र ३० देखि ५० वर्षसम्मका मानिसमा बढी संक्रमण देखिएको उनले बताए ।
‘६ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिका बाहिर खेल्न जान्छन्,’ उनले भने, ‘३० देखि ५० वर्षका बाहिर गएर आउने, काम गर्न जाने, किनमेलका लागि भीडमा जाने भएकाले सरेको हो ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ८, २०७७, १९:४६:००